Amava eDipho kaLoliwe eyodwa
Ndwendwela indawo yethu yokugcina uloliwe ka-1890. Esi sakhiwo sikhethekileyo satsala nzima ukuba sithenge indawo yethu. Lithuba lokonwabela ukubaleka kubomi besixeko. Ithemba lethu lelokuba le yindawo abantu abanokuphumla kwaye bayonwabele ubuhle bendalo. Indawo yokugcina inamagumbi ama-2 angaqhelekanga angabucala ngokupheleleyo kodwa abekwe kwindawo yethu yasefama eyahlukileyo kwindlu yethu engundoqo. Apha unokujonga izilwanyana zasendle ngamaxesha athile, izilwanyana zethu zasekhaya kunye nenye yeembono ezilungileyo kuMntla Dakota onokunikezela (ngokombono wam).
Indawo oza kuyirenta ngamagumbi amabini amakhulu, elinye linophahla oluphakamileyo. Esi sakhiwo yindawo yogcino lwembali kaloliwe ekumgangatho omnye, egcwele idokhi yokulayisha kunye nethambeka. Indawo yokugcina izinto ineempawu zale mihla (ezifana nombane oye wahlaziywa kulo nyaka) kodwa uninzi lomtsalane wayo usuka kuphawu lwembali. NCEDA UQAPHELE LE INDLELA YOKUHLALA “YOKUKHANYA” kodwa ifanelekile ngokoluvo lwam.
Ngaphakathi kukho igumbi elikhulu lokulala eli-1 elinendawo yokubeka imithwalo yokuqala, umgangatho ukuya kwiikhabhathi zokugcina isilingi (siyazisebenzisela ezi zinto ukugcina kodwa wamkelekile ukuba wabelane ngazo nathi) imigangatho yokhuni, iifestile ezinkulu zentsusa kunye nesango lokungena labucala. Kweli gumbi uya kufumana ibhedi yenkumbulo yokumkani, izitulo ezi-2, esofeni, kunye ne-tv enkulu ene-Roku kufuneka ukhethe ukuzisa i-WiFi hotspot. Kukho iingcango ezimbini zokungena kwipropathi ukusuka kwindawo yokulayisha (enerampu, akukho ntsimbi). Xa sele engaphakathi kula magumbi mabini ahlulwe ngocango olukhulu lweglasi. Umbindi wedepho yindawo eqhelekileyo kunye nendlovukazi kunye nebhedi ephindwe kabini, iqulethe isitovu sakudala somthi esivuthayo (siyabuza ngeli xesha ukuba lenzelwe ukubukeka / iinjongo zembali), ifriji, itafile endala engqukuva ene4 izitulo, i-microwave, isitovu, i-George Forman yokugezela yombane, kunye nendlwana ephethe izitya, kunye nezitya zeglasi kunye nedesika ejonge entlanjeni. Imigangatho yoqobo eyenziwe ngamaplanga ayikaphinda yenziwe kweli gumbi ukuze ukwazi ukubona amanqaku e-splatter asuka kwiintsiba ezivuza i-inki ephuma kwiqula le-inki lamatikiti. Ngaphandle kwendawo yokugcina izinto uya kufumana imithi emininzi, umlambo omncinci, indawo yokupaka, indawo enemithi yokunyuka ukuya kwindawo yoluntu yasendle kunye nebhulorho yokutsiba, indawo yomlilo, indawo enengca, kunye nendlu yangaphandle. Singathanda kwakhona ukugxininisa ukuba oku "glamping" amava. Ayisiyongxaki kwaphela kodwa linyathelo lokubuyela emva kumhlaba ongena-WiFi, intambo, umoya osembindini, nazo zonke ezo zinto sizithatha lula ebomini bethu. Isincede saxabisa kakhulu kwaye sifuna ukwabelana ngala mava.
Ndizamile ukubandakanya iifoto ezininzi kodwa azenzi ubulungisa ngokubona kwam.
Kukho ithuba lokubhukisha indawo yokulala eyongezelelweyo kwindlu yesikolo (indawo ekwabelwana ngayo edweliswe ngokwahlukeneyo kwi-Air BnB) okanye ukuqesha indawo yokukhempisha okanye yeRV (nceda uxoxe kwangaphambili). Sinayo ibhedi eyongezelelweyo yamawele enokuthi yongezwe kwindawo ngentlawulo eyongezelelweyo ukuba ufuna indawo yokulala engaphezulu. Igumbi lokuhlambela kunye nesinki (yokuhlamba izitya) zikwindlu enkulu (indawo ekwabelwana ngayo). Kukho ukufikelela kwi-24/7 kwigumbi lokuhlambela. Indlu yangasese iphelelwe lixesha kwaye sisebenza kancinci ukuyihlaziya, kodwa iyawenza umsebenzi.
Siya kwenza konke okusemandleni ethu ukwenza la mava alungele iimfuno zakho. Iikayak zinokufumaneka kwi-kayak emlanjeni osecaleni kwepropathi yethu (kuya kufuneka unikeze iibhatyi zakho zobomi kwaye kufuneka uzinxibe).
Izithintelo ezimbalwa: Ikhaya lethu lihlala liphantsi kolwakhiwo / uhlaziyo ubukhulu becala oku kuya kuchaphazela indawo ekwabelwana ngayo. Le yipropati endala embindini welizwe ngoko ke nceda ulindele ukuba oku kuya kwahluka kakhulu emva koko ukuhlala kwesixeko (ubusuku obumnyama, ingxolo yezilwanyana, iibhugi kunye nokungcola). Qinisekisa ukuba ugcwalisa igesi kwaye uze nakuphi na ukutya okanye i-snacks oza kuyidinga. Iikhilomitha ezili-10 ukuya kweyona ndawo ikufutshane kwaye bavale ngokuhlwa.
Indawo yokugcina izinto ayilawulwa yimozulu (yilungele imozulu eshushu nebandayo). Ngokuqhelekileyo siyivala iinyanga ezibandayo/ zasebusika. Ukuba ungathanda ukuyenza rhabaxa kwisitayile sobuvulindlela esibandayo saseNorth Dakota nceda usithumelele umyalezo.
Ngeenjongo zokwaliwa ndingathanda ukongeza ukuba kukho izilwanyana zasekhaya kwipropathi, kubandakanya izinja, iikati, iidonki, iinkukhu kunye namahashe. Zonke izilwanyana zilungisiwe kwaye zisebenza ngokugonywa. Senza ukuhlangula izilwanyana ukuze izilwanyana ezikwipropati zitshintshe rhoqo.
Ukuba ubhukisha nesilwanyana sasekhaya kuya kubakho idipozithi ye-$50 yesilwanyana sasekhaya, kunye ne-$25 ngentlawulo yohambo oluqokelelweyo xa ugcino lwenziwe. Izilwanyana zasekhaya kufuneka zitshintshwe, kwaye zilungele ugonyo. Izilwanyana zasekhaya kufuneka zihlale kwintambo, ngaphandle kwefenitshala nangaphandle kweebhedi. Idiphozithi yakho iya kubuyiselwa nje ukuba akukho monakalo okanye ukucoca okongeziweyo.
Sinekati ezihlanguliweyo ezihlala ngaphandle kwaye zizibulisi zezinja ngenxa yeso sizathu sifuna ukuba inja yakho ibe nobuhlobo kwikati.
Abazingeli: ngenxa yamava adlulileyo sifuna idiphozithi eyahluka ngokobungakanani beqela. Sikwafuna ukuba umdlalo wakho ucocwe kwaye inkunkuma ilahlwe kwipropathi. Nceda uthumele umyalezo ngolwazi olungakumbi kunye nemibuzo.
Sikumgama weemayile okanye ukusuka kwabamelwane abakufutshane kodwa sisendleleni kanye. Kungazola kakhulu kwaye kube noxolo ebusuku okanye usenokuva i-coyote ikhala ngamaxesha athile. Asinazo izibane zeyadi ezinkulu ukuze ukwazi ukubona umbono ongaphazamisekiyo weenkwenkwezi ngobusuku obungenamafu.
Ndiyakuthanda ukwazi wonke umntu nangona kunjalo ukuba ungathanda indawo yakho yabucala vele usazise. Nokuba iyasebenza kuthi.